जीवन बिमाका ४ कम्पनीले तेस्रो त्रैमासमा कस्तो गरे प्रगति ?
काठमाडौं : वैशाखको अन्तिम साता आइपुगिसक्दा जम्मा ४ वटा बिमा कम्पनीहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण सार्वजकि गर्ने मध्ये पनि २ वटा मात्रै सूचीकृत कम्पनी रहेका छन् । जसमा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल (एलआइसी नेपाल) र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स परेका छन् । विवरण सार्वजनिक गर्ने अन्य २ मा ज्योति लाइफ र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् ।
यी दुवै कम्पनीले साधारण सेयर (आइपीओ) निष्कासनको तयारीमा रहेका छन् । आइपीओ जारी गर्न बाँकी रहेकाले यी कम्पनी सूचीकृत भएका छैनन् । हाल नेप्सेमा ७ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ४ जीवन बिमामध्ये ३ कम्पनीको नाफा बढेको छ । अन्य सूचक पनि सकारात्मक रहेका छन् । हेरौं कुन कम्पनीको सूचक कस्तो ?
२ कम्पनीको पुँजी बढ्यो, २ को यथावत्
चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कम्पनीमध्ये २ कम्पनीको चुक्ता पुँजी गत वर्षको यसै अवधिमा भन्दा बढेको छ । २ को यथावत रहेको छ । चुक्त पुँजी बढ्नेमा एलआइसी नेपाल र प्राइम लाइफ रहेका छन् ।
यता, पुँजी यथावत हुनेमा आइपीओ जारी गर्न लागेका २ कम्पनी रहेका छन् । यद्यपि, यी कम्पनीहरुले बिमा समितिले निर्धारण गरेको २ अर्ब चुक्ता पुँजी भने अझै पुर्याएका छैनन् ।
४ वटै कम्पनीको जगेडा कोष बढ्यो, कुनले कति बढाए ?
चैत मसान्त सम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ४ वटै कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले जगेडा कोष बढाएको छ । यस इन्सुरेन्सको जगेडा कोष १२७.३४% ले बढेको छ ।
यी मध्ये सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको रहेको छ । प्राइमको जगेडा कोष यस अवधिमा १ अर्ब ११ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
४ वटै कम्पनीले जीवन बिमा कोष पनि बढाए
यस अवधिमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ४ वटै कम्पनीले जीवन बिमा कोष बढाएका छन् । सबै भन्दा धेरै जीवन बिमा कोष प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले बढाएको छ ।
प्रभुको जीवन बिमा कोष गत वर्षको यसै अवधिमा भन्दा १ हजार प्रतिशत भन्दा बढीले माथि लागेको छ । यद्यपि, गत वर्षको यसै अवधिमा कम्पनी भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । यस आधारमा पनि एग्रेसिभ काम अघि बढाउँदा प्रतिशत ह्वात्तै बढेको देखिएको हो ।
प्रभु लाइफको मात्र नाफा घट्यो
वित्तीय ववरण सार्वजनिक गर्ने कम्पनीमध्ये प्रभु लाइफ बाहेक अन्य कम्पनीको नाफा बढेको छ । प्रभु लाइफको नाफा गत वर्षको यसै अवधिमा भन्दा २१.९२% ले घटेको हो ।
यी मध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा प्राइम लाइफको रहेको छ । प्राइमको नाफा १४.३३% ले बढेर १६ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
२ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो
चैत मसान्तसम्म नेप्सेमा सूचीकृत २ कम्पनीकै प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी प्राइम लाइफको १९ रुपेयाँ ५ पैसाले घटेर १२ रुपैयाँ १३ पैसामा आएको छ ।
यद्दपि, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने मध्ये यो सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनी हो । यता, आइपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको प्रभु लाइफले प्रतिसेयर आम्दानी वित्तीय विवरणमा राखेको छैन ।